Shirkii guud ee Madaxda midowga afrika oo ka furmaya adis ababa. | shabakada banaadir24 online
Waxaa maanta magaalada Adis Ababa ee caasimada dalka Ethopiya ka biloowday dabaal dagga 50 guuradii ka soo wareegatay aasaaskii ururka midowga afrika.
Afhayeenka Madaxweeynaha Soomaaliya Ing C/raxmaan Cumar Yariisoow ayaa radiomuqdisho u sheegay inDabaal dagga ay ka qeeyb galayan madadxda wadamada ku jira ururka midowga afrika oo ay wehliyan madaxweeynayaal,ra,iisulwasaarayaal iyo wasiiro arrimo dibadyeedyo ka kale socda wadamada caalamka si ay goob joog uga noqdaan dabaal daggan taariikhiga ah.
Waxaa ka mid ah madaxda caalamiga ah ee ka qeeyb galaya shirka madaxweeynaha Faransiiska,iyo xoghayaha arrimaha dibada ee dalka maraykanka John Kerry.
Ing Yariisoow ayaa sheegay in Madaxweeynaha J.F soomaaliya Mudane Xasan Shiiq Maxamuud uu shalay madaxda afrika u sheegay in soomaaliya ay ka mid ahayd aabayaashii aasaasay ururka midowga afrika,kaalin mog lehna ka soo qaatay 1963dii ilaa 1991dii oo wadamada laga xureeyay gumeeysigii,soomaliyana ay hogaanka lahayd.
Madaxweeynaha Soomaaliya ayaa sheegay in 1974tii soomaaliya lagu qabtay shirka ururka midowga afrika.
Madaxweeynaha soomaaliya ayaa u mahad celiyay ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u joogo soomaaliya kuwaa 2011 kii ka saaray maliishiyaad shabaab African Village.
Madaxweeynaha soomaaliya Xasan Shiiq Maxamuud ayaa u sheegay in madaxda midowga afrika in loo baahanyahay in cashar laga barto 50kii sano ee la soo dhaafay,loona diyaar garoobo 50ka sano ee soo socota,madaxda afrikana ay u soo jeestaan sidii shacabka afrika ay ula tartami lahaayeen shucuubta qaaradaha kale.
Ing C/raxmaan Cumar Yariisoow ayaa sidoo kale sheegay in madaxweeynaha soomaaliya uu kulamo gaar gaar ah la yeelanayay qaar ka mid ah madaxda ka qeeyb galeeysa shirka,waxana uu la kulmay wasiirka afrika u qaabilsan dowlada ingiriiska,
Ing Yariisow ayaa sheegay in madaxweeynaha soomaaliya uu maanta la kulmi dooni Xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka John Kerry.
Madaxweeynaha Soomaaliya Xasan Shiiq Maxamuud ayaa la filayaa in uu khudbad ka jeediyo Shirkii guud ee madaxda midowga afrika oo maanta furmaya.
Shir guud ee madaxda midowga afrika ayaa la filayaa in looga hadlo arrimaha soomaaliya.
« “Sawirro”Madaxweynaha Soomaaliya oo waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay danjiraha Koonfurta Kuuriya ee Soomaaliya. salaadiin,ugaasyo,waxgarad,iyo nabadoono Soo Dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirkii urur goboleedka IGAD. »